ဘဘ ဘိုကလေးတင့်အောင်ဆီ သွားရောက်ကန်တော့ ဂါရဝပြုခဲ့ကြတဲ့ မင်းသန့်မောင်မောင်နဲ့ မေသန်းနုတို့ သားအမိ – Suehninsi
မေသန်းနုကတော့ မကြာသေးခင်ကမှ သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ကုသိုလ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေသန်းနုက အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်တွေကတော့ မေသန်းနုကို အရင်လိုပဲ
ချစ်ကြပြီး အားပေးစကားလေးတွေနဲ့ ကြိုဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေသန်းနုရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားလေး မင်းသန့်မောင်မောင်ကလည်း မိဘအပေါ်သိတတ်လိမ္မာတဲ့ သားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဖေဖေနဲ့မေမေကိုလည်း အမြဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးပြီး ဖေဖေ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်း
ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသန့်မောင်မောင်က အနုပညာပိုင်းမှာပါရမီပါပြီး ကြိုးစားတာကြောင့် နောင်တစ်ချိန်မှာ အရမ်းအောင်မြင်ဦးမယ့်သူဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုဆိုရင်တော့ မင်းသန့်မောင်မောင်နဲ့မေသန်းနုတို့က ဘဘဘိုးကလေးတင့်အောင်ဆီသွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသန့်ကတော့” မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့တစ်သက်တာဂုဏ်ထူး
ဆောင်ပညာရှင်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏နာယကကြီး ဘဘဘိုကလေးတင့်အောင်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံဂါဝရပြုကန်တော့ရခြင်းအတွက် အလွန်အမင်းဝမ်း‌မြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါသည်၊ မေ သန်း နု. သား မင်း သန့် မောင် မောင်”ဆိုပြီး ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
မသေနျးနုကတော့ မကွာသေးခငျကမှ သာသနာ့ဘောငျသို့ ဝငျရောကျခဲ့ပွီး ငွိမျးခမျြးစှာ ကုသိုလျယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။မသေနျးနုက အနုပညာအလုပျတှကေိုလညျး ဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျနဲ့ ပွနျလညျလုပျဆောငျနတောဖွဈပါတယျနျော။ပရိသတျတှကေတော့ မသေနျးနုကို အရငျလိုပဲ
ခဈြကွပွီး အားပေးစကားလေးတှနေဲ့ ကွိုဆိုနကွေတာဖွဈပါတယျ။မသေနျးနုရဲ့တဈဦးတညျးသောသားလေး မငျးသနျ့မောငျမောငျကလညျး မိဘအပျေါသိတတျလိမ်မာတဲ့ သားလေးဖွဈပါတယျနျော။ဖဖေနေဲ့မမေကေိုလညျး အမွဲစိတျခမျြးသာအောငျထားပေးပွီး ဖဖေရေဲ့အလုပျတှကေိုလညျး
ကူညီလုပျကိုငျပေးနတောဖွဈပါတယျ။မငျးသနျ့မောငျမောငျက အနုပညာပိုငျးမှာပါရမီပါပွီး ကွိုးစားတာကွောငျ့ နောငျတဈခြိနျမှာ အရမျးအောငျမွငျဦးမယျ့သူဖွဈပါတယျနျော။ အခုဆိုရငျတော့ မငျးသနျ့မောငျမောငျနဲ့မသေနျးနုတို့က ဘဘဘိုးကလေးတငျ့အောငျဆီသှားရောကျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။မငျးသနျ့ကတော့” မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကရဲ့တဈသကျတာဂုဏျထူး
ဆောငျပညာရှငျကွီး မွနျမာနိုငျငံရုပျရှငျအစညျးအရုံး၏နာယကကွီး ဘဘဘိုကလေးတငျ့အောငျအား သှားရောကျတှဆေုံ့ဂါဝရပွုကနျတော့ရခွငျးအတှကျ အလှနျအမငျးဝမျး‌မွောကျဝမျးသာဖွဈရပါသညျ၊ မေ သနျး နု. သား မငျး သနျ့ မောငျ မောငျ”ဆိုပွီး ပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝလောတာဖွဈပါတယျနျော။
Source : Min Thant Mg Mg’s Facebook | Reference & Credit : Myanmarload
အမေဖြစ်သူပိုင်တဲ့ ဧကပေါင်းများစွာကျယ်တဲ့ ခြံဝန်းကြီးထဲမှာ လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး